IAmazon iyatsha, imiphunga yomhlaba isemlilweni! : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	23 Agasti 2019	• 8 Comments
Nabani na ukhumbula ukuba xa umongameli wangoku waseBrazil, u-Jair Bolsonaro, weza waba luhlobo lwepolitiki eyingozi eyingozi eqondiswe kumaphephandaba, wazi kwangoko ukuba sithetha nomntu oxhasa i-ajenda yokulwa nokudibana kwehlabathi. . Umntu ozimeleyo ozenzela ezakhe izinto. Uhlobo luka-Boris Johnson, u-Thierry Baudet, uDonald Trump kunye nabo bonke abanye bezopolitiko abanamaphiko angathatha uzuko oluncinci, kodwa ekugqibeleni bazokungaphumeleli, kuba le yi-ajenda enkulu. Yonke into naye wonke umntu okhuselayo okanye okholelwa ukuba kukho iyelenqe (kwaye ngokuchasene nabo) kufuneka ekugqibeleni abeke ityala kuZwarte Piet ngokungaphumeleli, khon'ukuze nayiphi na ingxolo ephikisayo ngokudityaniswa kwehlabathi kunye neqela elidala le-elitist lihambelane ngokucacileyo Elo qela labangela intlekele kwezoqoqosho.
Ke ukuba uJair Bolsonaro uthi ii-NGO zinoxanduva lokukhanyisa imililo ye-Amazon, ke unokuyibona njengombono weqhinga. Umfanekiso wehlabathi uhleliwe: phantsi kukaJair Bolsonaro, amaphaphu omhlaba wethu atsha ngela xesha.
Kukwaluncedo ukuqhubeka nokuphindaphinda ukuba asinalo nofifi lokuba iindaba esizibonayo zisayinyani okanye akunjalo. Ngaba usakhumbula ukuba imbaleki ihamba iye kumda waseMexico ne-US? Usakhumbula na ukuphuma kwe-Ebola? Ngequbuliso sive enye into ngaloo nto emva kokuba amanyathelo okushukuma sele ephunyeziwe. Ke iingxaki ngequbuliso zinyamalala njengekhephu elangeni. Ngexesha lokubaleka lihamba liye kumda waseMelika, Ndi bonise ngokulula kangakanani ukwenza isihlwele ukuba sibukeke sikhulu ngesoftware; nakwimifanekiso yevidiyo. Kule mihla ubona intengiso ezininzi nangakumbi kumajelo asekuhlaleni afana ne-Facebook enika isoftware emnandi ukuhlengahlengisa iifoto (bona mzekelo). Iya isiba lula ngakumbi ukutshintsha umfanekiso kunye nesandi. Asazi nokuba sinayo nini Udliwanondlebe no-Bolsonaro Nokuba unguye ngokwenyani okanye siyahamba sodwa ukutshintshwa kobuso hlala ubukele. Inyani elula yokuba sikholelwa ukuba iziteshi eziphambili zeendaba ziinkampani ezisebenzisa amakhulu okanye amawaka abantu, kwaye umfanekiso esinawo wamanenekazi acocekileyo kunye namanenekazi afanelekileyo kwiimpahla, oko kuthetha ukuba sinokholo kuloo nto sizisiweyo ngayo.
Ngaba iAmazon isemlilweni ngokwenene? "Ewe, usayibona imifanekiso !?"Iyaqhubeka indimangalisa into yokuba akusenzeki ukuba ndicacisele abantu ukuba imifanekiso ayisabubungqina. Imifanekiso ayibonisi nto. Obu bungqina bodwa onabo xa ubona imifanekiso kukuba ubujonge kwiscreen sakho. Uyawubona umfanekiso. Yiyo. Nge-software yanamhlanje, yonke into inokudalwa kwaye iphathwe ngokukhawuleza. Jonga ividiyo engezantsi ukuze ubone indlela ii-network ze-neural (AI) zanamhlanje ezinokusebenzisa ifoto kwimizuzwana. Indlela efanayo ingemva yokudala imifanekiso yevidiyo (jonga apha). Siyabheja ucinga "Ewe, konke oko kuyakwenzeka, kodwa ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba i-Amazon isemlilweniMsgstr ". Ngaba uyazi ukuba kutheni? Kuba uyayibona kwimidiya yoluntu nakwindaba. Ukholo lwakho ke ngoko luxhomekeka kwabo ubacaphukisayo xa behlawula irhafu encinci kangaka kwaye benamawaka ezigidi kwiakhawunti yabo yebhanki; Elo qela lincinci. Uya kuyifumana iyacaphukisa into yokuba kukho iqela elincinci labantu abazizityebi elitsala bonke ubutyebi, kodwa ungayinanzanga into yokuba baneziteshi ezinkulu zeendaba kunye ne-intanethi njengesixhobo sokudlala nabo.
Ngaba iAmazon isemlilweni? Asazi! "Ewe, kodwa ndiyazi umntu ohlala apho okuqinisekisayo“Uhlala phi lo mntu kwaye ukho kule ndawo ukubukela imililo okanye loo mntu ufumana iindaba ezindabeni? "Ewe, kodwa eBrazil abayi kuxoka ngento enjalo? Ngubani oncedayo koku? Ukuba uBolsonaro uhambile, ngaba eendaba nge-Brazil akuyi kusilawula isicwangciso?"" Unokuphikisana. Ke ulibale ukuba, njengaseMelika noDonald Trump (ekuthiwa ulwa imfazwe enzulu), abezopolitiko bangabadlali nje ekufuneka bebonakalise ukubonakala kwabo kwaye benze izinto ngokubambisana neendaba kunye nolunye uhlobo losasazo. Awuyi kuba semandleni ukuba awuyongqina lokuphalaza kwegazi. Oko kunokuhamba kakhulu kuninzi, kodwa jonga kwinqaku lam lakutshanje kwi-Ursula von der Leyen, umongameli omtsha we-EU (jonga apha) kwaye ufumane ukuba isebenza njani.
Imithombo yeendaba ikhona ukuze idlale abantu kwaye ixhase ukukhohlisa wentando yesininzi. Abezopolitiko kunye namajelo osasazo badlala umdlalo obeka esweni iscript kunye nokuyalela umkhombandlela kwicala elimiselweyo, ngaphandle kokuqonda ukuba kudlalwa ngokusisigxina ngokwenza, ubuqhetseba nenkohliso.
Le "brand yeAmazon" ngokucinga nje ijikeleze umbono wezopolitiko kunye nokuzinza komlinganiso ngakwesokudla. Phakathi kwezinye izinto, ndinenkcazo ecacileyo yale nkqubo kunye nenkcazo yophawu lwasekunene eli nqaku inikiwe. Funda kwakhona eli nqaku kwaye ufumanise ukuba umdlalo udlalwa njani.
tags: mhlabeni, umlilo wehlathi, umlilo wamahlathi, uhlobo, eziziimbalasane, Jair Bolsonaro, imiphunga, mazone, NGO
UAna de Ubusika wabhala wathi:
23 Agasti 2019 kwi-10: 09
Kumnandi! Enkosi ngokubhala phantsi ukuba ihamba njani ... kanye le bendiyicinga xa ndibona ngequbuliso ezi "ndaba" ziyeza ...
keazer wabhala wathi:
23 Agasti 2019 kwi-10: 11
Le vidiyo indikhumbuza kwakhona ukuba sinokwakha into enje kweli lizwe ngokusebenzisa umzobo wabantwana olula. Kulula kangakanani ukwenza into enje ngale yangaphandle yeli lizwe ukuba ithethe ngearhente?
23 Agasti 2019 kwi-10: 59
Umhlobo wam uhlala eBrazil, naseSao Paulo ... ndikwacinga ukuba ndingathanda ukukubelana ngalezi ndaba, kuba bekukho intetho kumajelo obumnyama njengobusuku ngenxa yabo bonke umsi emini. Akukho nto ivela phi !! Ndimthumele imephu yeendaba eziphambili zento ebhengezwa apha kwaye uthi akukho nto iyinyani.
Kwenzeka njani ukuba imithombo yeendaba ibe yinto engenamsebenzi ... Nawuphi na umntu ocinga ngokulula uyazi ukuba into elolu hlobo ngombuzo olula inokuthi ibhalwe njengeendaba ezingezizo ngokubuza umhlobo wakho ohlala apho?!
Ndandinawo onke amathandabuzo am amakhulu malunga neendaba, kodwa ngenxa yeli bali baphulukene nentembeko epheleleyo .. Isikizi ...
23 Agasti 2019 kwi-12: 49
Andikwazi ukuqinisekisa impendulo yakho (esebenzayo ngokubanzi), kodwa ukuba ibali lakho liyinyani, kusoloko kukho umkhosi wonke weetroli elinde wena ukuba ubange okuchaseneyo (abasebenzi abahlawulwayo abagada iingxoxo zosasazo lwentlalo).
23 Agasti 2019 kwi-13: 42
Ewe ewe ... ukuba ufuna ukutsala isikhwama:
Imililo eyoyikekayo yomlilo kwihlathi laseAmazon ayinakulawulwa kwaye isanda mihla le. IAmazon ibaluleke kakhulu kwizilwanyana nakubantu, nasekulweni utshintsho lwemozulu. Kungenxa yoko le nto iWWF iqala iphulo likaxakeka. Kodwa xa sisonke sinamandla, nceda ngokunjalo! Bhala i-AMAZONE kwi-4333 ngoku kwaye unikele nge-3 euro. Ungathumela imiyalezo rhoqo njengoko uthanda! Ngaba ufuna ukwazi okungakumbi? https://www.wwf.nl/kom-in-actie/noodactie-bosbranden
23 Agasti 2019 kwi-13: 46
Ewe ewe nangemva kokutsalwa kweendleko zeParcot entsha kumlawuli, imali yakho iya kuchithwa ngendlela eluncedo. Kusenokwenzeka ukuba kukho eminye imithi emitsha ecwangcisiweyo kwipaki yezilwanyana ye-Apeldoorn, kodwa ke uninzi lweebhloko zentengiso ye-TV kufuneka zithengiwe kunye nezibhengezo ezibizayo kumaphephandaba, ukuze abantu abaninzi babe ngamalungu. Le yeyona nto ibaluleke kakhulu.
23 Agasti 2019 kwi-21: 20
Ibhaso eliphezulu lomkhosi
Dibanisa kunye thabatha amandla adaliweyo kwindalo esingqongileyo kunye nokudibanisa, christ / anti christ, kulungile / kubi, njetera
I-Seasheprd ayinazo iinwele ngaphandle kwabanye, abantu bathetha abalungileyo njengamatsha-ntliziyo kodwa umlawuli uye etafileni nenkampani engaqhelekanga
Umongameli Osama wabhala wathi:
24 Agasti 2019 kwi-00: 25
I-NASA ithi bambalwa imililo yehlathi:
I-5.000 enjalo endaweni ye-15.000 12 kwiminyaka eyadlulayo.
Kuyacaca ukuba uBolsonaro kufuneka ahambe.
« Ngaba kuya kubakho iintloko kwiqonga likaJeffrey Epstein?
Yintoni eyinyani yokuhlaselwa ngokufa ngenxa yokuhamba ngeenyawo kwa-Assen? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.390.813
Ikhamera 2 op Yintoni eyinyani ngokubulawa kukaDerk Wiresma kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?
Karel Reuterz op Yintoni eyinyani ngokubulawa kukaDerk Wiresma kwaye kuthetha ntoni oko 'ngqina lesithsaba'?
Caesar Caesar Cachet op Ngaba kuya kubakho umlo phakathi kwe-US ne-Iran kungekudala?